हितोपदेश 8 ERV-NE - ज्ञान नै असल - Bible Gateway
हितोपदेश 7हितोपदेश 9
हितोपदेश 8 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
ज्ञान नै असल स्त्री हुन्
8 के ज्ञानले तिमीलाई बोलाउँदैन र?
के समझशक्तिले तिमीलाई ठूलो स्वरमा बोलाएको छैन र?
2 ऊ अग्लो ठाउँहरू माथि उभिन्छे,
जहाँबाट दोबाटो देखिन्छन्।
3 ऊ शहरको प्रवेशद्वार नजिक छे,
उनले खुल्ला ढोकाहरूबाट बोलाइरहेकी छे।
4 ज्ञानले भन्छे, “हे मानिस हो, म तिमीहरूलाई आह्वान गर्दछु,
म सबै मानिसहरूलाई बोलाउँदैछु।
5 तिमीहरू जो अनुभवी छैनौ भने ज्ञानी हुन सिक।
हे मूर्खहरू हो, बुझ्न सिक।
6 तिमीहरू सुन, म जुन कुराहरू सिकाउँछु, तिनीहरू महत्वपूर्ण छन्।
जुन कुराहरू सही हुन, तिनीहरू नै भन्छु।
7 मेरा वचनहरू सत्य हुन।
किनभने मेरा ओंठहरूले मिथ्यालाई घृणा गर्छन्।
8 मेरो मुखबाट निस्केका सबै वचनहरू सही तथा न्यायपूर्ण हुन्छन्
अनि कुनै पनि भ्रमित तथा झूटो हुँदैनन्।
9 यी सब भनाईहरू समझ हुने मानिसहरूको लागि स्पष्ट छन्
अनि ज्ञानी मानिसहरूको निम्ति तिनीहरू सरल छन्।
10 मैले दिएका उपदेशहरू स्वीकार गर, कारण तिनीहरू चाँदी भन्दा असल छन्,
अनि बहुमूल्य सुन लिनु भन्दा ज्ञान र बुद्धि लिनु नै उत्तम हो।
11 ज्ञान मोतीहरू भन्दा अझ उत्तम हो।
ज्ञान मानिसले चाहने ती सवै चिजहरू भन्दा असल हो।”
12 “म ज्ञान हुँ।
अनि म बिवेकसँग बस्छु।
तिमीले मलाई विद्या अनि राम्रो योजनासँग पाउनँ सक्छौ।
13 परमप्रभुको डर मान्नु नै दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो।
अभिमान, अहंकार, कुटिल व्यवहार
अनि छलपूर्ण बोलीलाई म घृणा गर्छु।
14 मसँग राम्रो सल्लाह अनि स्वास्थ्य ज्ञान छ।
मसँग समझशक्ति अनि सामर्थ्य छन्।
15 मेरै सहायतामा राजाहरूले राज गर्छन्,
अनि शासकहरूले उचित कानून बनाउँछन् जुन सही र न्यायपूर्ण हुन्छ।
16 राजकुमारहरू, राजकीय मानिसहरू,
निष्पक्ष न्याय घोषणा गर्नेहरूले आफ्नो काम मद्वारा गर्छन्।
17 म ती मानिसहरूलाई प्रेम गर्छु, ज-जसले मलाई प्रेम गर्छन्
अनि यदि मानिसहरूले मलाई चेष्टा गरेर खोज्छन् भने तिनीहरूले मलाई भेट्ने छन्।
18 धन दौलत र आदर मसित रहन्छ,
म अनन्त धन अनि साँचो सफलता प्रदान गर्छु।
19 मैले दिएका भेटीहरू शुद्ध चाँदी भन्दा असल छन्
औ म जुन चीज दिन्छु तिनीहरू अकबरी सुनभन्दा असल हुन्छन्।
20 म मानिसहरूलाई सही मार्गमा डोर्याउँछु,
म तिनीहरूलाई सही न्यायले चल्ने पथमा डोर्याउँछु।
21 मलाई मन पराउनेहरूलाई सम्पत्ति दिन्छु,
हो, म तिनीहरूको घर नै सम्पत्तिले भरिदिन्छु।
22 “परमप्रभुले उहाँको प्राचीन कार्यहरू भन्दा पहिला
सृष्टिको प्रारम्भमा नै मलाई बनाउनु भयो।
23 यो संसार सृजना गरिनु भन्दा पहिला
अस्मरणीय आनन्द कालमा मेरो सृजना भयो।
24 जब त्यहाँ भूमध्यसागर थिएन, म जन्मिएको थिएँ।
पानीले भरिएको महा-सागरहरू भन्दा पहिला म जन्मिएको थिए।
25 पर्वतहरूलाई तिनीहरूको ठाउँमा राख्नु भन्दा अघि,
पहाडहरू हुनु भन्दा अघि म जन्मिएको थिएँ।
26 परमप्रभुले पृथ्वी रच्नु भन्दा पहिल्यै, खेत सृजना गर्नु भन्दा पहिल्यै,
पृथ्वीमा पहिलो धूलो बनाउँनु भन्दा अघि नै, म त्यहाँ थिएँ।
27 जब परमप्रभुले आकाश सृष्टि गर्नु भयो, म त्यहाँ थिएँ।
जब परमप्रभुले क्षितिजहरूको चित्रसागरको प्रतिबिम्ब माथि कोर्नु भन्दा पहिला म त्यहाँ थिएँ।
28 जब उहाँले आकाशमा बादल राखेर
महा-सागर सृष्टि गर्नु भन्दा पहिला म जन्मेको थिएँ।
29 उहाँले समुद्रको सिमाना तोक्दा
उहाँको आज्ञा नाघी पानी बाहिर नजाओस् भनी
उहाँले पृथ्वीको जग बसाउँनु हुँदा।
30 म उहाँको छेउमा एउटा प्रिय बालक झैं थिएँ। म दिन प्रतिदिन उहाँको खुशीयालिमा थिएँ।
हर समय उहाँको उपस्थिमा निरन्तर आनन्द मनाउँथें।
31 म उहाँले सृष्टि गर्नु भएको संसारमा आनन्द लिन्छु,
म मानव जातिमा खुशी लिन्छु।
32 “अनि अब, हे मेरो छोराहरू, मलाई सुन!
ती मानिसहरू भाग्यमानी हुन्
जो मैले देखाएको बाटोमा हिँड्छन्।
33 मेरो शिक्षाहरूलाई सुन अनि ज्ञानी बन,
तिनीहरूलाई अस्वीकार नगर।
34 जुन मानिसले मेरो कुरा सुन्छ,
त्यही मानिस नै भाग्यमानी हुनेछ,
जसले दिनहुँ मेरो ढोकामा आँखा लगाइरहन्छ,
जसले मेरो ढोकाको सङ्घार पर्खिरहन्छन्, तिनीहरूनै धन्य हुन्छन्।
35 किनभने जसले मलाई पाउँछ, उसले जीवन पाउँछ।
अनि उसैले परमेश्वरबाट अनुग्रह पाउँछ।
36 तर जसले मेरो बिरूद्ध पाप गर्छ, उसले आफैंलाई हानी पुर्याउँछ।
जसले मलाई घृणा गर्छ उसले मृत्युलाई प्रेम गर्छ।”